Maalinta Afrika sidoo kale waa fursad ku habboon in diiradda la saaro sheekooyinka guusha ee iskaashiga, dhaqan-dhaqaale ee qaaradda oo dhan, iyo fursad lagu milicsado aasaaskii Ururka Midowga Afrika (OAU) - oo ugu dambeyntii noqday Midowga Afrika (AU).
AU waa urur guud oo Afrikaan ah, oo isu keena wakiillo ka socda 55 waddan oo Afrikaan ah, si ay uga wada hadlaan arrimaha siyaasadda iyo bulshada, dhaqanka iyo aragtida caalamiga ah, soo saarista hindiseyaal iyo siyaasado si wax la qabto dhibaatooyinka badan ee Afrikaanka ah.
Mid ka mid ah waaxaha Midowga Afrika oo horumar aad u wanaagsan ka sameeyay horumarka Afrika waa nabad ilaalinta. Qorshaha nabad ilaalinta AMISOM ee Soomaaliya 2011 ayaa isu keenay shaqaale badan oo kala duwan oo ka kala yimid dalal kala duwan oo Afrikaan ah, kuwaas oo si firfircoon gacan uga geystey in Muqdisho laga xoreeyo al-Shabaab.
Qaar badan oo ka mid ah iskaashiyadaan ayaa lagu sameeyay shaqeynta iyo taageerada wada-hawlgalayaasha caalamiga ah, oo ay ku jiraan Mareykanka iyo Qaramada Midoobay. Ilaa 2011, joogitaanka AMISOM ee sii socota waxay gacan ka geysatay abuuritaanka xilli nabad ah, ilaalinta laba dowladood oo ku meel gaar ah, laba dowladood oo federaal ah iyo laba doorasho.
Xasiloonidaasi waxay awood u siisay qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed inay wax ka qabtaan arrima badan oo gudaha ah oo ay diiradda saaraan horumarka dalka.
Sannadka 2020-ka, Golaha Dhaqaalaha, Bulshada iyo Dhaqanka ee Midowga Afrika ayaa qabtay shir-warbaahineed si ay u soo bandhigaan guulaha iskaashiga ah ee Midowga Afrika, waxayna sidoo kale iftiimiyeen sida wax badan looga qaban karo horumarinta Midowga Afrika.
'Saxaafadda Afrika waxay door weyn ku leedahay in dadka u soo dhaqeyso Midowga Afrika si ay u ogaadaan inuu yahay ururkeenna qaaradaha.'
William Carew, isu-duwaha maamulaha ee xoghaynta ECOSOCC
Golaha laftiisa waa la doortay, wuxuuna ururada bulshada rayidka ah ee Afrika siiya madal ay saamayn ku yeeshaan siyaasadda AU. Waxa kale oo ay kor u qaadaysaa horumarinta qiyamka dimoqraadiyadda ee Afrika iyada oo siinaya madal fikrado lagu wadaago, iyo sidoo kale fursad ay warbaahintu kula falgasho shakhsiyaadka ku jira Guddiga Midowga Afrika.
Xittaa inkastoo aan ku jirno cudurkaan masiibada ah, Maalinta Afrika 2021 waxay sidoo lagu arkay marti-gelin badan oo kala duwan oo dhiirigelinaya wada-shaqeynta xisbiyada iyo qaramada.
#ZeroMalariaStartsWithMeCampaign waxa lagu dabbaaldegay dalalka xubnaha ka ah Midowga Afrika ee ka shaqeeyay iskaashiga si loo xiro daldaloolada aqoonta duumada, iyo wanaajinta ka qaybgalka bulshooyinka si caabuqa herkiisa u noqdo eber.
Si loo taageero ololaha, MTV Base, YouTube iyo jilaaga Idris Elba ayaa martigeliyay bandhiga 2aad ee riwaayadda maalinta Afrika si loo dhaqaajiyo waxqabadka caalamiga ah iyo taageerada ka joojinta duumada Afrika. Dhacdada muuqaalka ah ee Dadyowga Afrika waxa ka qayb qaatey fannaaniin Afrikaan ah ka socda qaaradda oo dhan iyaga oo wata farriimo taageero iyo dhiirigelin ah oo ku aaddan tallaabo waara oo ku toosan sidii loo ciribtiri lahaa Duumada.
Qaybta dhallinyarada ee Agaasinka Haweenka, Jinsiga iyo Dhalinyarada (WGYD) ayaa iskaashi la yeeshey TikTok iyo Trace TV si ay u bilaabaan olole cinwaan looga dhigay #IAmAfrican. Ujeeddada ololada waa in lagu xuso oo lagu muujiyo aqoonsiga kala duwan ee dhalinyarada Afrika oo dhan iyada oo loo marayo muraayada fanka, dhaqanka, iyo hidaha.
Mawduuca sanadkan waxa uu diiradda saarayaa nafaqeynta iyo doorka muhiimka ah ay leeyihiin kaabayaasha cuntada Afrika oo adkeysi badan leh, oo si isku filan wax u qaban doonaa ka dib masiibada Covid-19 ee dhowaan dhacday.
Tan iyo markii la aasaasay in ka badan konton sano ka hor, Maalinta Afrika waxay noqotay dabbaaldegga dhabta ah ee Afrikaanka iyo dadka ka soo jeeda Afrika ee adduunka oo dhan.
Maalinta Afrika waxay sidoo kale fursad u tahay ummadaha iyo muwaadiniinta si ay uga fikiraan muhiimada dhabta ah ee Midowga Afrika iyo guulihii ay soo hoysay.
Iyada oo kor loo qaadayo wadahadal togan, macno leh oo dhex mara dawladaha, iyo hamiga lagu doonayo in xal nabadeed laga gaaro colaadaha, AU waxa ay noqotay urur muhiim ah oo qiyamka dimuqraadiga ah ku beera qaaradda Afrika.
Awood-siinta Hab-Samaynta Dhismaha Afrika: Qalabka waara iyo isku-xirnaanta bulshada ee udub-dhexaadka u ah wax-abuurista Diébédo FrancisHadda aqri